Kuvikelwa abasimame ngemiKhosi yeSilo – bigtime-mag
Kuvikelwa abasimame ngemiKhosi yeSilo
August 2, 2017 August 2, 2017 • Eazydude_SA
Izintombi zakwaZulu kulindeleke ukuba ziyokwethula izithungo koNgangezwe lakhe kulempelasonto mhla zi Nhlanu kwephezulu esigodweni seSilo Khangela Mankengane KwaNongoma.
Umkhosi wesivivane uba minyaka yonke lapho izintombi zikaZulu sisuke zizofundiswa khona ngezemfundo amakhono abangazithuthukisa ngawo besebethola nethuba lokuxoxa noNdlunkulu beSilo ngezinqinamba ababhekana nazo, kuzifunda zabo ezithinta abantu besimame abasebancane, lomkhosi uzophinde ukhumbuze abantu besimame ngenyanga yabo. Kuzokhumbuleka ukuthi ngenyanga kaNcwaba yinyanga yabesimame lapha eNingizimu Africa besuke behlonishwa bephinde bakhunjulwe ngeqhaza abalibamba emzabalazweni wokulwela inkululeko yalelizwe.
Umnyango wezoBuciko naMasiko Kwazulu natal oholwa ngumhlonisha Nkosikazi Bongi Sithole Moloi ubambisene neNdlunkulu kaZulu uvuselela Amasiko kubantu ,nemikhuba kazulu eyayenziwa kusadliwa ngoludala efundisa abesimame ukuziphatha nokuvizikela ezifweni ezihlasele abantu abasha namhlanje kakhulukazi ubhubhane lwesandulela Ngculazi nengculazi uqobo kanye nokukhulelwa besebancane.
Isilo Samabandla His Majesty the King Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu kulindeleke ukuba ethule inkulumo yosuku kulomkhosi lapho u Bayede ezobe enaba ngomkhosi Wesivivane aphinde anike izintombi iziyalo.lomkhosi wandulela umkhosi Womhlanga obanjalo ngenyanga kamaMandulo esigodweni seSilo Enyonkeni.lapho amatshitshi asuka kuzozonke izingxenye zezwe esuke elethe umhlanga koMdala.
Sithole ithanga lezimeshe ISilo Sizalwa kwaLinduZulu